मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले दशगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपालतर्फ फर्काएर सिसिटिभी राख्न नपाउने बताए
विराटनगर । सीमा क्षेत्रमा अनेकौं कचिंगल निकालेर नेपाललाई दुःख दिँदै आएको भारतीय पक्षले सीमा नाकामा सिसीटिभी राखेरै नेपाली भूभागको गुप्तचरी गरिरहेको पाइएको छ ।
विराटनगर भन्सार कार्यालय रानीको १ नं. गेट छेउमा भारतीय पक्षले नेपालतिर फर्काएर दुईवटा सिसीटिभी राखेर नेपाली भूभागको गुप्तचरी गरिरहेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाहरुमा यसरी अर्को मुलुकको भूभागको गुप्तचरी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले वर्जित गरेको छ । यद्यपि भारतीय पक्षले भने सीमा नाकामै यस्तो गतिविधि गरिरहेको छ ।
कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले २०६७ चैत १२ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । सोही दिनदेखि सीमा नाका सिल गरिएको थियो । भदौदेखि सीमावर्ती क्षेत्रदेखि मानिसको आवतजावत हुन थालेपछि गत भदौ २ गतेदेखि भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्रमा सिसीटिभी राखेको हो । भारतले राखेको सिसीटिभीले विराटनगर रानी भन्सार कार्यालय बाहिरको सम्पूर्ण दृश्य देखिन्छ । सिसीटिभीले प्रहरी चौकी रानी अगाडि र भन्सार सुरक्षामा खटिएको प्रहरीको सम्पूर्ण गतिविधि पनि देखिने गरेको छ ।
दुई देशको सीमा क्षेत्रको दशगजामा केही गर्न नपाउने प्रावाधान रहेको छ । तर, भारतीय पक्षले दादागिरी शैलीमा दशगजा क्षेत्रमा सिसीटिभी राखेर नेपालतर्फको निगरानी र सुरक्षा अवस्थाको बारेमा बुझ्ने गरेको सुरक्षा स्रोतले बताएको छ । ‘दशगजा क्षेत्रमा नेपालतिर फर्काएर दुई वटा सिसीटिभी तस्र्याएर राखेको छ,’ सीमाक्षेत्रमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘यसरी नेपालतिर फर्काएर सिसीटिभी नराख्न हामीले गरेको बारम्बारको आग्रह पनि भारतीय एसएसबीले बेवास्ता ग¥यो । हामीले धेरै पटक हटाउन भन्यौं । तर, हाम्रो कुराको सुनवाइ भएन ।’
यसरी दशगजा क्षेत्रमा राखिएको सिसीटिभीको मनिटर जोगवनीमा रहेको बुझिएको छ । भारतीय पक्षले विराटनगर रानी भन्सार कार्यालयको १ नं. ढाटदेखि आवतजावत गर्नेहरुको र विराटनगर भन्सारको सम्पूर्ण गतिविधि नियाल्ने गरेको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले दशगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपालतर्फ फर्काएर सिसिटिभी राख्न नपाउने बताए । ‘यसरी दशगजा क्षेत्रमा नेपालतिर फर्काएर सिसीटिभी राखेको पाइए हटाउन भारतीय प्रशासनसँग पहल अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘चाँडै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक पनि बस्दैछ । यस विषयमा छलफल पनि गर्नेछु ।’ दशगजा क्षेत्रमा नेपालतिर फर्काएर राखिएको सिसीटिभी हटाउन पहल गर्ने उनले बताए । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १ नम्बर बराह बाहिनी मुख्यलाय सुनसरीका निमित्त कार्यालय प्रमुख एसएसपी प्रकाश थापाले दशगजा क्षेत्र केही गर्न नपाइने बताए ।
‘दशगजा क्षेत्र भनेको दुवैतिरको समान अधिकार हुने क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा दुवै देशले केही गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘दशगजा क्षेत्रमा कसैले पनि बेस बनाएर राख्न पाइँदैन । यदि सिसीटिभी नेपालतिर फर्काएर राखिएको भए हटाउन पहल गरिनेछ ।’ सिसीटिभी राखिएको सीमा क्षेत्र सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) रानी विराटनगर क्षेत्रको पर्दछ । सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका एसपी तिर्थ पौडेलले अहिलेसम्म दशगजा क्षेत्रमा नेपालतिर फर्काएर सिसी टिभी राखिएको विषयमा कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘अहिलेसम्म दशगजा क्षेत्रमा सिसीटिभी राखिएको जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘कसरी राखेको छ । त्यस्तो छ भने आधिकारिक रुपमा जिल्ला सुरक्षा समिति रहेको छ । हामी संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्नेछौं । त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’
आइतबार, १० असोज, २०७८, साँझको ०७:५२ बजे